Mabhuku Akanakisa aJöel Dicker, "Iyo Irriting Literary Anoshamisa Mukomana" | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku akanakisa aJöel Dicker
Quote naJoël Dicker.
Kana mushandisi weInternet achibvunza nezve "Jöel Dicker mabhuku", mhedzisiro inomutungamira Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert. Uye hazvisi zvishoma, nekuti ino novel yakashandura munyori mudiki kuita nyeredzi. Basa racho rakashandurwa mumitauro inodarika makumi mana uye rakatengesa makopi anodarika zviuru mazana mana pasi rese.
Panguva ino, el New York Times anozvinyora se "Iyo inogumbura yekunyora prodigy"; mamwe midhiya akadai se "Muchinda mudiki wemazuvano mabhuku evatema." Kunyangwe zvisiri zvese zvaive zvakanaka pakutanga, izvi hazvina kumisa munyori. Pane kudaro, tambo yega yega yakadhonzwa naiye inova chinhu chakakosha. Uchapupu hweizvi mabhuku ake anopfuura mamirioni gumi akatengeswa, izvo zvinoshandura mukubudirira kukuru.
1 Biographical synthesis yaJöel Dicker
1.1 Kutanga mumabhuku
2 Mabhuku akanakisa aJöel Dicker
2.1 Chokwadi Icho Nezve Harry Quebert Affair (2012)
2.3 Bhuku reBaltimore (2015)
2.4 Kutsakatika kwaStephanie Mailer (2018)
2.5 Chirahwe chekamuri 622 (2020)
Biographical synthesis yaJöel Dicker
Jöel Dicker akauya pasi rose muna Chikumi 16, 1985 kuGeneva, guta reSwitzerland rine mutauro wepamutemo chiFrench. Kunyangwe anga asiri mudzidzi akanaka achiri mudiki, aigara achiratidza tarenda rakakura rezvisikwa tsamba. Aingova nemakore gumi chete akatanga La Gazette des Animaux (Iyo Yemagazini Magazini), iyo yaakatungamira kwemakore manomwe akateedzana. Iri basa rakamupa iye mubairo wePrix Cunéo weKuchengetedzwa Kwezvisikwa se "Switzerland mudiki mupepeti-in-mukuru".
Vechidiki vaDicker vaishandiswa kumusha kwake, asi At 19 akafunga kuenda kuParis. Ikoko akatora zvidzidzo zvemitambo pachikoro chemitambo Course Florent. Gore rakatevera, akadzokera kuSwitzerland kunodzidza zvemutemo paYunivhesiti yeGeneva, achiwana dhigirii muna 2010.
Kana uchitaura nezvekutanga kwaDicker semunyori, pane anecdote inoenderana: kutora kwake chikamu mumakwikwi evadiki ekunyora. Mumakwikwi aya akapa rondedzero pfupi Tiger, uye akarambidzwa nekuti mutongi mukuru akapa kusahadzika pamusoro pekunyora kwake. Kunyangwe mamiriro acho akatsamwisa murume wechidiki, iye parizvino anoona sechinhu chinogumbura chakazomukurudzira kuti avandudze.
Muna 2009, Dicker akapedza bhuku rake rekutanga rakadaidzwa Mazuva ekupedzisira emadzibaba edu, zvichibva kuUK Chakavanzika Chekuchenjera Service. Mushure mekusaunza kufarira kune chero muparidzi, muna 2010 akafunga kuzvinyoresa mu Prix ​​des Ecrivains Genevois yemabasa asina kunyorwa. Munyori ndiye akahwina mubairo uyu wakakosha, kuti pakupedzisira ibudirire kuburitswa kwayo gore rakatevera ne Éditions de Fallois.
Heano mabhuku akanakisa aJöel Dicker:
Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert (2012)
Iri basa rakaburitsa budiriro yemudiki munyori wenhau, ichidarika mamirioni mana emakopi akatengeswa pasi rose. Pamusoro pekushandurirwa mumitauro inopfuura makumi mana, yakashandurwa kuita yeTV miniseries muna 2015, ichitamba nemukurumbira mutambi Patrick Dempsey. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ino novel yakapihwa mibairo miviri yakakosha, senge:
Mubairo Mukuru weNew Novel yeFrench Academy
Prix ​​Goncourt des Lycéens, yakapihwa nevadzidzi
Iyo inoverengeka yakavanzika yemhosva inotanga muna2008.Iyo yakaiswa mutaundi diki reAurora, New Hampshire. Nyaya inosuma Marcos Goldman - munyori wechidiki--, anogara kuNew York uye ari kumanikidzwa kupedza basa rake rechipiri rekunyora. Achiri kutsvaga kurudziro, anodzidza kuti Harry Quebert - shamwari uye munyori ane mukurumbira - anopomerwa mhosva yekupondwa kweiye mudiki Nola Kellergan, chiitiko chakaitika muna 1975.
Marcos, akanyengetedzwa nehunhu hwake, anovimba kuti Quebert, chipangamazano wake, haana mhosva, saka akafunga kuenda kuAurora kunobatsira kugadzirisa chirevo ichi. Ikoko kunotanga kurongwa kwenhau ino isingatendeseki, inoitika pakati penguva dzakasiyana -1975, 1998 na2008- uye marongero akasiyana siyana. Pakati pezvakawanikwa zvakawanda, Marcos, pamwe nekuferefeta, anotanga kunyora bhuku nezvenyaya iyi. Kupera kwechirongwa ichi kunouya mushure merwendo rurefu, rwakaoma uye rwunonakidza.
Chokwadi nezve nyaya ...
Bhuku reBaltimore (2015)
Ndiyo rondedzero yechitatu yakaburitswa naDicker. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti ine protagonist yayo Marcos Goldman, zvakafanana Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert. Zvisinei, kunyangwe vamwe vachiedza kutarisisa kuti inoteedzera kune yakanyanya-kutengesa hit, hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi. Zvichida kungoitika kwakakosha pakati pezvinyorwa zviviri izvi ndekwekuti vane hunhu hukuru. Kune vamwe vese, iri basa nyowani mutambo wemhuri wakanangana nekudonha kwehukama hwemitezo yenhengo dzeGoldman caste.
Iyo Montclair Goldmans - iyo divi raMarcos ndeyayo - mhuri yepakati-yepakati inogara muNew Jersey. Zvakapesana neizvozvo, maBaltimore Goldmans - vanogara muguta rino - vakakomberedzwa nemari neumbozha. Muna 2012, Marcos, akakundwa nezviyeuchidzo zvenguva dzakapfuura mavaigovana vachifara, anosarudza kutsvaga ruzivo ruchamuudza kana mhuri yaparara. Kuti aite izvi, protagonist anoita rwendo Baltimore, apo rangano iri zvakazara.
Mbichana mbichana, Pakati pezviyeuchidzo zvinodzokororwa zvezviitiko zvemhuri, zvokwadi yerima yakavanzwa iyo yakapa nzira kuGoldman kubhuroka kunoziviswa. Zvinyorwa zvinoburitswa sepuzzle mune dzakasiyana ndangariro dzeMarcos, zvinoreva kuti muverengi anofanirwa kutarisisa kune zvese uye kuronga kwavo kwekupedzisira mhedzisiro yakatenderedza mutambo.
Bhuku reBaltimore ...
Kutsakatika kwaStephanie Mailer (2018)
Mushure mekuzorora kwemakore matatu, Dicker akaburitsa rondedzero yake yechina, zvakare kubheja pane zvakavanzika. Iyo nyaya inoitika mune imwe spa inonzi Orphea, iri muThe Hamptons. Izvo zvese zvinotanga mu1994, apo Samuel Paladin anotsvaga zvakanyanya mukadzi wake Meghan. Gare gare, murume anowana mukadzi wake akafa, pamberi chaipo pemba yaMeya Gordon.
Senge sekunge izvo zvataurwa pamusoro zvakange zvisina kushata zvakakwana, zvese zvinowedzera. Paladin, akashungurudzika, anosarudza kupinda muchivako chemukuru uye anosangana nechiitiko chinotyisa uye chine ropa: munhu wese ari mukati afa. Mapurisa maviri (Jesse Rosenberg naDereck Scott) ndivo vanoona nezvekuferefeta, vachikwanisa kubata "mhondi" iyi.
Mushure memakumi maviri emakore akareba, Scott anoenderana mumutambo wekurega basa weumwe wake Rosenberg; mutori wenhau anoonekwawo ipapo Stephanie tsamba. Her inoti vaongorori vakanganisa, uye kuti vakasunga munhu asiriye nekuda kwemhosva yakapetwa ka1994. Iko kutaura kunodyara kusahadzika mumaofficial. Ipapo Mailer anoshamisa anonyangarika, nokudaro zvichikonzera kusagadzikana muhuwandu hwevanhu. Panguva iyoyo chaiyo kutsvaga kwekuziva pakati pekare neazvino kunotanga kupedzisa kuisa chirabwe chinotungamira kuchokwadi chisingatarisirwe.
Kunyangarika kwe ...
Chirahwe chekamuri 622 (2020)
Mune ino nyowani nyowani, iye anonyora laureate anoenderera kubheja pane zvakavanzika. Iye zvino chikamu chikuru chiri muSwiss Alps, kunyanya muhotera yepamusoro Palacio de Verbier, munguva yechando yegore ra2014. Vashandi vebhangi rakazvimirira reSwitzerland vaive vakagara imomo, vaizoita musangano wekuzivisa director mutsva. Pahusiku hwekugadzwa - mukamuri 622 - mumwe wevatungamiriri vesangano akaurayiwa. Zvisinei nekukura kwenyaya iyi, mhosva iyi haina kujekeswa uye haina kurangwa.
Makore mana mushure mechiitiko ichi - muzhizha re2018 - munyori mudiki uye ane mukurumbira (ane zita rimwe chete nemunyori, Jöel Dicker) anogara kuhotera. Iye murume ari kuyedza kuzvichenesa mushure mekundikana kwerudo uye kurasikirwa kwemuviri kwemupepeti wake. Asina kuzvitarisira, anosangana naScarlett, akanaka mudiki anoshuvira munyori wenhau, uyo anomusuma iye kune iyo nguva yechando yegore ra2014 mushure mekurondedzera kuuraya kusinganzwisisike. Kubva panguva iyoyo, vese vari vaviri vanoenda mukuferefetwa kuti vasunge zvakasununguka pakati pekupokana kwerudo nekutengesa.
Chakavanzika che ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Mabhuku akanakisa aJöel Dicker
Luis Villalon. Kubvunzana nemunyori weEl cielo sobre Alejandro
Mabhuku akanyanya kutyisa (chikamu chechipiri)